मानिसको हैन राक्षसको जगत बनेको छ देश, पशु खाना किन यति हतार? -भिडियो हेर्नुस् - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७४ चैत ११ गते २२:५१ मा प्रकाशित
गाई नेपालको राष्ट्रिय जनवार हो अनि हिन्दु धर्ममा माता भनेर पुजा गरिन्छ।
एउटा अबोध प्राणि गाईलाईमार्ने कि बचाउने भन्ने बहस चल्दै गर्दा ति प्राणिको मनले मानवलाई कति सराप्दो हो। उनीहरुले मनमनै जगतका सर्वश्रेठ भनिएका मानव नामक राक्षसहरु हामि जनवार माथि राजनीति गर्दैछन भन्दै खिल्ली उडाइ रहेको होला।
जनवार र मानिसको भाषा मिल्दैन। त्यसैले हामीले बोलेको उनीहरुले र उनीहरुले बोलेको हामीले बुझ्न सक्दैनौ। तर महसुस दुवैले गर्न सक्छ, एकले अर्काको महसुस गर्न सक्दा सक्दै पनि हामि यति धेरै निर्दयी किन बन्छौं?
हामीले मन गुरुङ्गले लेखेको लेखलाई भिडियोमा समावेस गरेका छौं यो भिडियो हेर्नु होला।